IITemplate zePowerPoint SIMAHLA-Ukhetho olwahlukileyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Encarni Arcoya | 11/09/2021 13:03 | Izibonelelo
Esona sixhobo sixhaphakileyo sabafundi, nokuba sesikolweni, kwiziko okanye kwiYunivesithi, ngaphandle kwamathandabuzo, yiPowerPoint. Ngayo bayakwazi ukwenza izilayidi abaza kuthi ngazo basondeze isihloko kwabo bafunda nabo, okanye ekufuneka beyinike ootitshala babo. Ngaphakathi kwinkqubo ungayifumana Iitemplate zenqaku lamandla Kodwa uza kuthini ukuba ufuna ukuba yeyentsusa?
Ngethamsanqa, besikhe sayicinga loo nto, ukuyinika into yokuyila kunye nokuba ungaphandle kwesiqhelo ukuze umsebenzi wakho ujongeke ngcono. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kanjani? Jonga iitemplate zePowerPoint esizifumeneyo onokuzisebenzisa emsebenzini wakho, nokuba zezobungcali okanye zezemfundo. Ngokuqinisekileyo ngaloo ndlela uthimba ingqalelo yabo bonke ababonayo.
1 Kutheni ubheja kwiitemplate zePowerpoint yoqobo
2 Ezona template zintle zamandla okuphuma kwesiqhelo
2.1 Itemplate yokwazisa eneesangqa ezimibala-bala
2.2 Itemplate yomgca wothingo
2.3 Iitemplate zamanqaku eVintage
2.4 Izikhokelo zamanqaku e-Power kwi-Canva
2.5 Inkcazo yeholide emnandi
2.7 Iitemplate zenqaku lamandla kwiimveliso
2.8 Inkcazo yeBrand
2.9 Iitemplate zePower Point eziMnandi
2.10 Ukunikezelwa kweemveliso
2.11 Itemplate yeshishini
2.12 Iitemplate zePowerPoint zokutyela
Kutheni ubheja kwiitemplate zePowerpoint yoqobo
Ukuba unayo inkqubo yePowerpoint, kuyinto eqhelekileyo ukuba uneetemplate kuyo kwaye uzisebenzisele umsebenzi wakho. Nangona kunjalo, ukuba uqala ukwenza okuninzi, banokubonakala ngathi baphindaphindeka, kuba ekuphela kwento oza kuyitshintsha yimibala kunye nesicatshulwa.
Ngaphambili, kwaye okwethutyana, oku ibibonwe kakuhle kuba ngaloo ndlela zonke iiprojekthi zinemilo efanayongokunjalo nemisebenzi, kwaye kwakungekho mahluko. Kodwa, ngokuhamba kwexesha, abantu baqala ukukhetha, ukudinwa kukubona okuqhelekileyo, kwaye baqala ukuqaphela ukuba, ngotshintsho oluncinci, bafumana unxibelelwano ngakumbi, amandla amaninzi, njl.
Ngoku ukuba neetemplate zePowerpoint ezingavumeli kuphela ukuba isicatshulwa sibe sekhompyuter, kodwa zikwayihombise kwaye zenze ingqalelo yombukeli ijonge kwiinkcukacha ekuxoxwa ngazo, iphumelele ngakumbi. Gcina ukhumbula ukuba kuya kufuneka ume ngaphandle kwesihlwele kwaye obu buchule bokuyila bubaluleke kakhulu ekufezekiseni oku. Yintoni egqithisile, Umboniso wePowerpoint kukudibana okokuqala nabaphulaphuli bakho, Kwaye inokuba nefuthe kwimpumelelo okanye ukusilela kwawo wonke umsebenzi wakho. Ke kutheni ungabinazo iitemplate ezinesitayile kwaye ezizityebisa ngokwenene iiprojekthi zakho?
Ezona template zintle zamandla okuphuma kwesiqhelo
Emva koko siza kukunika imizekelo yeetemplate zePowerpoint ntetho ukuze ungasoloko uhlala kwinto enye.
Itemplate yokwazisa eneesangqa ezimibala-bala
Ngayo uya kuba nakho ukunika ukubonakala okunamandla ngakumbi kunye novuyo kwiiprojekthi zakho. Ikhumbuza uninzi lweGoogle, ngakumbi i izangqa kunye nemibala, ke kwiiprojekthi ezinxulumene netekhnoloji, i-Intanethi, amaphepha ewebhu, njl. inokuba yimpumelelo kakhulu.
Itemplate yomgca wothingo
Iyahlelwa ngokupheleleyo kwaye ungazitshintsha zombini iifoto kunye nesicatshulwa. Ukongeza, unayo Iislayidi ezingama-25 ezahlukeneyo, ke unokuyenza ngokwezifiso zakho. Inemifanekiso engama-80 kunye nemephu yehlabathi apho unokutshintsha imibala kunye nobukhulu ukuyilungisa.
Ithempleyithi yokubonisa umgca we-rainbow
Iitemplate zamanqaku eVintage
Ngeli xesha sicinge enye nge Umnwe omdala kunye nenhle, ngobuhle obuthile kunye nostalgia ngaxeshanye. Ilungele ukuboniswa okungagxili kangako kwikamva nakweli langoku, kodwa kugcinwa umoya womoya ofudumeleyo wenkonzo okanye imveliso.
Itemplate yokubonisa yeediliya kunye nemoodboard
Izikhokelo zamanqaku e-Power kwi-Canva
Kule meko asithethi nge template ethile, kodwa malunga nendawo apho uya kuba nakho ukufumana iitemplate zePowerpoint ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Uneemodeli ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwinjongo yeprojekthi yakho, nokuba yeyokuqalisa kwakhona, yenethiwekhi yoluntu, yeentengiso, yeentetho. njl. Into entle yile Bakhululekile, kuphela ezinye zazo ziya kuhlawulwa.
Inkcazo yeholide emnandi
Ilungele ukubonisa iprojekthi yokuhamba, umzekelo kumashishini okuhamba, iihotele, iivenkile zokutyela, njl.
Uya kuzifumana izilayidi ifomathiwe kwaye yalungiswa ukuze ubandakanye kuphela imifanekiso kunye nesicatshulwa ekufuneka usibekile. Ijongeka intle kakhulu kwaye umfanekiso unikwa kuqala kunombhalo kuba into efunwayo kukubamba ingqalelo kubo.
Ukuba le nto uyikhangelayo ziitemplate zePowerpoint ezinzulu ezijongeka ngesimbo sobuchwephesha, ngaphandle kokukruqula nokungakhathali, unayo. Umbala ophambili uluhlaza okwesibhakabhaka, ke ukuba uyintandokazi yakho sele unento oyifumeneyo, nangona inyani kukuba inokuguqulwa ngemibala emine. Ikwanayo Iitemplate ezingama-45 ezahlukeneyo zokuhlengahlengisa umsebenzi wakho kwimfezeko.
Iitemplate zenqaku lamandla kwiimveliso
Ukuba ufuna ukwakha ifayile ye- intetho-esekwe kwifoto, njengoko inokuba yimveliso (indlu, igumbi, umhombiso, njl.njl.) unayo enye yazo. Itemplate apho isicatshulwa simi ngaphandle kodwa, ngaphezulu kwako konke, imifanekiso.
Ngaphambi kokuba sikuxelele ezo templates zintle Akunyanzelekanga ukuba bakruquke okanye babe krwada, kwaye lo ngomnye umzekelo onawo. Kuyo uya kusebenzisa imibala ebalaseleyo, kunye nomhlophe. Iya kukunika ukubamba okunamandla ngakumbi kwaye akufuneki ukuba kubi, kodwa iya kujongeka ingcali kodwa ibambe "ukubengezela".
Iitemplate zePower Point eziMnandi
Inyathelo eliphakathi yile. Ijongeka ingcali ngakumbi kwaye isisiseko, kodwa kwangaxeshanye Iqaqambisa izinto ezithile kwizilayidi ezahlukeneyo, ekuvumela ukuba ubonise iprojekthi enzulu kodwa kunye neebrashi ezithile ezizodwa.
Enye yeetemplate zePowerpoint onokuzisebenzisa ukubonisa iimveliso yile. Yi ntetho yasimahla egxile kuyilo lwangaphakathi, nangona inyani kukuba ungayisebenzisa kwizinto ezininzi ngakumbi.
Ukuba ujonge ukubonisa ishishini kwaye akukho semthethweni, kodwa ngokuchaseneyo, unokucinga ngale ntetho. Lubonakala ngo imizobo yoqobo kunye noyilo, Kwithoni ebomvu kunye nembonakalo eyinika "into" engaqhelekanga kunye neyempuma.
Iitemplate zePowerPoint zokutyela
Ukuba iprojekthi kunye nomthengi wakho inento yokwenza nendawo yokutyela, le yeyona ntetho ibalaseleyo onokuyisebenzisa. Yitemplate yesitayile sanamhlanje eneendlela ezahlukeneyo zokubonisa iimali, iqela lomsebenzi, imveliso, njl. Ukongeza unako yenza ngokwezifiso ngokutshintsha uhlobo lwefonti, imibala kunye nokunye.
Njengoko ubona, kukho iitemplate ezininzi zePowerpoint, kuya kufuneka ufumane eyona ilungele oko ukufunayo. Ngaba akucebisi nayiphi na?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iitemplate zePowerPoint SIMAHLA